စပိန်နယူးလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (SLNE) ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကစပိန်နယူးလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (SLNE) တရားဝင်a"က Sociedad Limitada Nueva Empresa" ဟုခေါ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ဤအမျိုးအစား SL (LLC) ရက်နေ့မှာအသစ်တခုအပြောင်းအလဲဖြစ်ပါတယ်။ LLC ရဲ့န့်အသတ်ရှယ်ယာရှင်များရှိသည်နိုင်ကြောင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားကုမ္ပဏီများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ တစ်ဦး LLC ဆင်တူ, ဖွဲ့စည်းရေးတစ်ရိုးရှင်းပြီးအမြန်မှတ်ပုံတင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
SLNE ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းဘို့ခွင့်ပြုပညတ်တရားသည် 2003 အတွက်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ယင်း၏ရည်ရွယ်ချက်စပိန်ဖွဲ့စည်းရန်အသေးစားကုမ္ပဏီများကအားပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ အစား LLC အားဖြင့်ပျော်မွေ့န့်အသတ်ရှယ်ယာရှင်များ၏, ထို SLNE အများဆုံးငါးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့တည်ထောင်သူရဲ့အမည်များကိုများထဲမှအသုံးပြုရမည်အတိုင်းကုမ္ပဏီအမည်ကိုတစ် LLC ကနေကွဲပြားနေသည်။ နိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်တစ် LLC နှင့်တူ 3,000 ယူရိုဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, က 120,000 ယူရိုမှာအများဆုံးရှိတယ်။
ယင်း၏ရှယ်ယာအားလုံးပိုင်ဆိုင်နေချိန်မှာနိုင်ငံခြားသားများတစ် SLNE ဖွဲ့စည်းလို့ရပါတယ်။
တစ်ဦးကစပိန်နယူးလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (SLNE) အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိပါတယ်:
• နိုင်ငံခြားရေးပိုင်ရှင်များ: စပိန်တစ်ဦး SLNE အတွက်ရှယ်ယာအားလုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ငံခြားသားများခွင့်ပြုထားသည်။
• ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရား: ရှယ်ယာရှင်တာဝန်ယူမှုသူ / သူမ၏လှူဒါန်းခဲ့သည်မြို့တော်မှကန့်သတ်သည်။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ: တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်တစ်ဦး SNLE ဖွဲ့စည်းခွင့်ရှိပါသည်။
• တဦးတည်း Manager က: နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်ဝါးရှယ်ယာရှင်ဖြစ်နိုင်သူတဦးတည်းမန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်။
• အနိမ့်နိမ့်ဝေမျှမယ်မြို့တော်: လိုအပ်သောနိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော် 3,000 ယူရိုဖြစ်ပါတယ်။
• အစာရှောင်ခြင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း: အဆိုပါ SLNE တနေ့အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။
• အီးယူအသင်းဝင်: စပိန်ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်ကတခြားဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အခွင့်အလမ်းတွေပေးထားပါတယ်။
အခြားမည်သည့်ကုမ္ပဏီနှင့်မတူဘဲ, အ SLNE ရဲ့နာမညျကိုက၎င်း၏အစိုးရမှတ်ပုံတင်နံပါတ်နှင့်ထားသောစာပိုဒ်တိုများ "Sociedad Limitada Nueva Empresa" သို့မဟုတ်ယင်း၏အတိုကောက် "SLNE" တစ်ခုခုနှင့်အတူ၎င်း၏တည်ထောင်သူရဲ့ပထမဦးဆုံးနာမတျော၏တဦးတည်း၏အကြောင်းနှင့်နှစ်ဦးကိုမျိုးရိုးအမည်ပါဝင်ရမည်။ နှစ်ခုမျိုးရိုးအမည်နှစ်မျိုးလုံးမိဘမြား၏မိသားစုအမည်များအပါအဝင်၏စပိန်ယဉ်ကျေးမှုလိုက်နာပါ။ အများစုမှာအင်္ဂလိပ်စကားပြောလျှောက်ထားသုံးခုအမည်များကိုဖွဲ့စည်းရန်သူတို့၏ပေးထားသောအလယ်နာမည်များပါဝင်သည်။ ဥပမာ, "ဝီလျံရောဘတ်စမစ်" ဟုလက်ခံနိုင်ဖွယ်ပထမဦးဆုံးအမည်နှင့်နှစ်ခုကိုမျိုးရိုးအမည်ဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရကမှတ်ပုံတင်နံပါတ်အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်လူတစ်ဦးအတွက်မှတ်ပုံတင်သည့်အခါပေးအပ်ထားတဲ့တစ်ဦး၏ ID-CIRCE ကုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ID ကို-CIRCLE စပိန် LLC နှင့် SLNE ၏အစာရှောင်ခြင်းမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားတဲ့အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏စပိန်အမည် "Empresas က de Centro က de Información y ကိုနီက de Creación" ဖြစ်ပါတယ်။ နှင့်၎င်း၏အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ချက် "ပြန်ကြားရေးစင်တာတွင် & စီးပွားရေး Setup ကိုကွန်ယက်" ဖြစ်ပါတယ်။
မူလတည်ထောင်သူမဟုတ်တော့တဲ့ရှယ်ယာရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, အခြားအမည်မူရင်းအမည်ဖြင့်အစားထိုးရန်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ရှယ်ယာရှင်ရဲ့အမည်အား အသုံးပြု. မရှိတော့မလိုအပ်ပါလိမ့်မည်; မဆိုနာမကိုအမှီနေသမျှကာလပတ်လုံးကဗဟိုကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Registry ကိုကအတည်ပြုဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သစ်တစ်ခု SLNE မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါသည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏အများပြည်သူအကျင့်တို့နှင့်အွန်လိုင်းတစ်ခုတည်းအီလက်ထရောနစ်စာရွက်စာတမ်း file ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ခွင့်ပြုချက်ဖိုင် 48 နာရီအတွင်းဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
third party တာဝန်ယူမှုကိုအစုရှယ်ယာရှင်များ၏ '' လှူဒါန်းခဲ့သည်မြို့တော်မှကန့်သတ်သည်။
အဆိုပါ SLNE ရှယ်ယာရှင်များတဦးတည်း၏အနိမ့်ဆုံးငါးဦးရေအများဆုံးရှိနိုင်ပါသည်။ သာကိုသဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များရှယ်ယာရှင်များဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အခြားဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများရှယ်ယာရှင်များဖြစ်ခွင့်မရှိပါ။ တစ်ဦးကရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးတည်းသာ SLNE အတွက်ရှယ်ယာရှင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အသင်းဝင်ရှယ်ယာလွှဲပြောင်းတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်မှတ်ပုံတင်အပြီးတိုးမြှင့်စေနိုင်သည်။ ရှယ်ယာဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းများကဝယ်ယူလျှင်မည်သို့ပင်သည်, ရှယ်ယာသုံးလအတွင်းကသဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များသို့လွှဲပြောင်းရမည်ဖြစ်သည်။
မန်နေးဂျင်းကိုယ်ခန္ဓာ၏အသင်းဝင်များရှယ်ယာရှင်များဖြစ်ရပါမည်။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦး SLNE က၎င်း၏ရှယ်ယာရှင်များအားဖြင့် Self-အာဏာရဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးကဘုတ်အဖွဲ့အားပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။ တဦးတည်းတစ်ခုတည်းသောရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးတည်းသောမန်နေဂျာနိုင်ပါတယ်။
အလောင်းတွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရှယ်ယာရှင်များ၏အထွေထွေဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ် Multi-ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစီမံခန့်ခွဲခြင်းခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များအထွေထွေအစည်းအဝေး (စစ်အစိုးရအထွေထွေ) ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အားဖြင့်၎င်း, ကုမ္ပဏီရဲ့ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေကပြွီးအားဖြင့်သာတည်စေနိုင်သည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်း, လယ်ယာစိုက်ပျိုး, သစ်တော, မွေးမြူရေး, ငါးဖမ်း, ဆောက်လုပ်ရေး, စက်မှု, စီးပွားဖြစ်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, အရစ်ကျ, ဆက်သွယ်ရေး, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်န်ဆောင်မှုများ, လူအပေါင်းတို့သည်အခြားဝန်ဆောင်မှုလှုပ်ရှားမှုများ: အဆိုပါဥပဒစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှုများတွင်အောက်ပါအမျိုးအစားများကိုခွင့်ပြုပါတယ်။
အဆိုပါကော်ပိုရေးရှင်းရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုထက် ပို. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှုများပါဝင်နိုင်သည်။
စပိန်လျော်သောစာရင်းကိုင်အလေ့အကျင့်များနှင့်ငွေသားစီးဆင်းမှု, ဝင်ငွေ, ကုန်ကျစရိတ်, ဆုံးရှုံးမှု, သာတူညီမျှအတွက်အပြောင်းအလဲ, ချိန်ခွင်စာရွက်ပါဝင်သည်ပေးသောဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တိုင်း SLNE လိုအပ်သည်။
အများဆုံးပမာဏကို 3,000 ယူရိုဖြစ်ပါတယ်နေစဉ် SLNE အဘို့အနိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော် 120,000 ယူရိုဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူ၏ရှယ်ယာရှင်များငွေသား၏အစား "ကဲ့သို့-မျိုး" ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်တဲ့ LLC မတူဘဲ, အ SLNE ရှယ်ယာရှင်များမှသာငွေသားအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်။ မြို့တော် 120,000 ယူရိုထက်ကျော်လွန်လျှင်, ကုမ္ပဏီ reregister ရမည်ဖြစ်သည်။
ပညတ္တိကျမ်းတစ်နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေရှယ်ယာရှင်များမှာ '' အစည်းအဝေးလိုအပ်သည်။ တစ်ဦး SLNE သေးငယ်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကအစည်းအဝေးများကျင်းပကြသည်ရသောထုံးစံနှင့် ပတ်သက်. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လည်းမရှိ။
အဆိုပါ SLNE တစ်ဦးတည်းသာအခှနျပြန်လာလိုအပ်အခွန်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းဥပဒေရေးရာ entity အဖြစ်ကုသနေပါတယ်။
ပညတ္တိကျမ်းတစ် SLNE အကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်နှောင်းပိုင်းတွင်ငွေပေးချေမှုပြစ်ဒဏ်များပေးဆောင်စရာမလိုဘဲတဦးတည်းနှစ်နှစ်ကနေကြိုတင်ငွေပေးချေခြင်းနှင့်အခွန်ရှောင်နှင့်အတူအချို့သောအခွန်များပေးဆောင်ခြင်းဆိုင်းငံ့ပေးရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
အဆိုပါ 2017 ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကို 25% ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Value ကို Added အခွန် (VAT) 21% ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်အချို့ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ VAT ကို%4မှ 10% ရှိပါတယ်။
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Registry ကိုမှတ်တမ်းများအများပြည်သူရရှိနိုင်ပါသည်။
ဖြစ်စဉ်တနေ့ကြာတဲ့ SLNE မှတ်ပုံတင်လူတစ်ဦးအတွက်သို့မဟုတ်အများကြီးပိုမြန်အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
100% နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု, ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှု, တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်တဦးတည်းမန်နေဂျာအနိမ့်လိုအပ်သောနိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်မြန်ဆန်တနေ့အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ရေးနှင့်အီးယူအဖွဲ့ဝင်: တစ်ဦးကစပိန်နယူးလီမိတက်တာဝန်ဝတ္တရားကုမ္ပဏီ (SLNE) ဤအကြိုးခံစားခှငျ့ရှိသညျ။